သင်္ကြန်တွင်း အိမ်မှာပဲနေရတာ ကျန်မာရေးကြောင့် နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် နားလည်မပေးနိုင်တဲ့အချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်အာဘွိုင်း - Cele Gabar
သင်္ကြန်တွင်း အိမ်မှာပဲနေရတာ ကျန်မာရေးကြောင့် နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် နားလည်မပေးနိုင်တဲ့အချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်အာဘွိုင်း
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် အာဘွိုင်းကတော့ လက်ရှိကမ္ဘာတစ်လွှာမှာ ကြုံ့တွေ့နေရတဲ့ ကျန်မာရေးအခြေအနေကြောင့် မြန်မာတို့ရဲ့ အခါသင်္ကြန်ကိုတောင် အိမ်မှာပဲနေရလည်း ကျန်မာရေးကြောင့်မို့ နားလည်ပေးလို့ရပြီး နားမလည်ပေးနိုင်တဲ့အချက်ကိုတော့ “ဒီနှစ်သင်္ကြန် အိမ်မှာပဲနေရလည်း ကိစ္စမရှိဘူး။ နားလည်ပေးလို့ရတယ်။ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတယ်။ အေး… ဒါပေမယ့် အိမ်မှာနေရမယ့် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း Internet လိုင်းကျနေတာတို့… နှေးနေတာတို့ဆိုရင်တော့ လုံးဝ နားမလည်ပေးနိုင်ဘူးနော်! ကြိုပြောထားတာ! ဒါပဲ!” လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုတော်အာဘွိုင်းကတော့ လက်ရှိကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူအများစုဝေးမှုတွေရှောင်ရှားရင်း ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ အခါသင်္ကြန်ကို အရင်နှစ်တွေကလို အကြီးအကျယ်မပြုလုပ်ဖို့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် သင်္ကြန်တွင်းကို အိမ်မှာပဲနေရာတာလည်း ကိစ္စမရှိဘဲ ကျန်းမာရေးကအရေးကြီးတာကြောင့် နားလည်ပေးလို့ ရပေမယ့် အိမ်မှာနေရမယ့် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အင်တာနက် လိုင်းကျတာနှေးနေတာတို့ဆိုရင်တော့ နားမလည်နိုင်ပါဘူးလို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ပြောပြထားပါတယ်။ အာဘွိုင်းကတော့ မင်းသမီးချောလေး မြတ်ရတနာကျော်နဲ့အတူ ရွှေလက်တွဲထားပြီး ချစ်စရာသမီးချောလေး Scarlett PhyoTun ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ သူဟာ ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူ ရွှေလက်တွဲပြီးချိန်ကစကာ အနုပညာအလုပ်ကိုတွေကို ရပ်နားခဲ့ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် ဝန်းရံခြင်းကို ရရှိထားပါသေးတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်အဖြစ်ကနေရပ်နားကာ စီပွားရေးအလုပ်တွေကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အာဘွိုင်းကတော့ သင်္ကြန်တွင်းကို အိမ်မှာပဲနေရာတာကို ကျန်မာရေးကြောင့်မို့ နားလည်းနိုင်ပေမယ့် အင်တာနက် လိုင်းကျတာတွေမဖြစ်ဖို့တော့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရေ အာဘွိုင်းလို့ သင်္ကြန်တွင်းကို အိမ်တွင်းပုန်း လိုင်းသုံးမယ့်သူတွေရှိကြလား…..
ပထမဆုံးကြော်ငြာရိုက်ကူးမှုမှာတင် မထင်မှတ်ထားလောက်တဲ့အထိ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ အက်စတာ
သူ့ရဲ့ အမွှာလေးကို ရှာတွေ့သွားကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့ သန္တာဗိုလ်